Farm life -- Zimbabwe -- History -- 20th century. (Concept) - Dover Public Library
Farm life -- Zimbabwe -- History -- 20th century.
The Resource Farm life -- Zimbabwe -- History -- 20th century.
1 Items that share the Concept Farm life -- Zimbabwe -- History -- 20th century.
Context of Farm life -- Zimbabwe -- History -- 20th century.
<div class="citation" vocab="http://schema.org/"><i class="fa fa-external-link-square fa-fw"></i> Data from <span resource="http://link.dover.nh.gov/resource/ZJKWHUfDOi4/" typeof="Intangible http://bibfra.me/vocab/lite/Concept"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a href="http://link.dover.nh.gov/resource/ZJKWHUfDOi4/">Farm life -- Zimbabwe -- History -- 20th century.</a></span> - <span property="offers" typeOf="Offer"><span property="offeredBy" typeof="Library ll:Library" resource="http://link.dover.nh.gov/"><span property="name http://bibfra.me/vocab/lite/label"><a property="url" href="http://link.dover.nh.gov/">Dover Public Library</a></span></span></span></span></div>
Data Citation of the Concept Farm life -- Zimbabwe -- History -- 20th century.